I-Silicone yangena ebomini bethu | I-Honneur
I-Silicone ingene ebomini bethu ngeendlela ezahlukeneyo.
Zisetyenziselwa imfashini kunye neendwangu zokwenza iimpahla. Njengama-elastomers kunye nerubber zisetyenziselwa izinto zokuncamathela, iiarhente zokudibanisa, amalaphu endwangu, ukuhlanganisa imitya kunye nabathungi bemthungo. Ngelixa ulwelo kunye ne-emulsions zisetyenziselwa ukugqitywa kwendwangu, ii-oyile zeentsinga kunye nezinto ezinceda kwinkqubo.
I-silicone coating esetyenziselwa isambatho yenza ukuba iphefumle kwaye ihlale kamnandi. Ngelixa kwizicelo zemizi-mveliso njengeemoto, ulwakhiwo kunye nempahla yezemidlalo, ukufunyanwa kwe-silicone kunika amandla, ukumelana nobushushu obugqithisileyo, ukufuma, imisebe ye-UV nomlilo.
Itekhnoloji ye-Silicone ifumene ukuthandwa kuzo zombini iifashoni kunye nezicandelo zempahla yendalo. Kwifashoni, iingubo ezisekelekileyo ze-silicone zineenzuzo ezininzi. Iyakwazi ukunciphisa i-shrinkage, ukukrala simahla, ukugqobhoza simahla, ukongeza ukuthamba kwilaphu, kunobungangamela bamanzi aphezulu. Ukulamba kwe-silicone kwilaphu kugcina ukubambelela kwendwangu kwaye kungabi nzima kubanda okanye ukubola xa kutyhilwa bubushushu obuphezulu.
Iilicones zilula ukuqhubekeka kwaye ngenxa yoko iindleko ziyasebenza. I Silicones zinokubonwa njengee-resin ezihamba simahla, iiplasitiki eziqinileyo, iigel, irabha, umgubo kunye nolwelo oluncinci kunamanzi okanye lube mninzi njenge-paste. Ukusuka kwezi ntlobo ze-silicone, iimveliso ezisisiseko zesilicone ezingenakubalwa ziyilelwe kwaye zenziwa emhlabeni wonke ngenxa yeendwangu ezahlukeneyo zamalaphu kunye nezomzi mveliso.
Ixesha lokuposa: Jul-16-2020